Faahfaahin: Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay hotel ku dhow Villa Somalia oo ay ku joogeen wafdi Turki ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Qarax ayaa galabta ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, gaar ahaan meel ku dhow Hotel SYL, oo ahaa hotelkii 10-kii bishaan Janaayo lagu qabtay shirkii wasiirada Arrimaha Debadda IGAD.
Weerarka oo loo adeegsaday gaari lagu soo xiray walxaha qarxa ayaa lala beegsaday Hotelka SYL, kaasoo haataan ay ku sugan yihiin wafdi ballaaran oo ka socda dalka Turkiga, islamarkaana horudhac u ah booqashada madaxweynaha Turkiga oo beeri laga sugayo Muqdisho.
Inta la ogyahay ilaa laba boolis ah iyo qofkii gaariga ismiidaaminta ah weday ayaa ku dhintay weerarka, iyadoo la sheegay in wafdiga Turkiga aan wax dhibaato ah soo gaarin.
Warbaahinta dalka Turkiga ayaa qoray in hoteelka albaabkiisa uu ku dhacay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, balse ay badbaadeen wafdigii ka socday Turkiga oo hoteelkaas ku lahaa shir xilliga uu qaraxu dhacayay.
“Hoteelka waxaa deggenaa wafdi Turki ah, wax khasaare ah oo gaarayna ma jirto,” ayuu yiri Faarax Nuur oo ka tirsan saraakiisha booliiska Soomaaliya.
Cap. Faarax Nuur ayaa intaas ku daray. “Gaarigu wuxuu ku qarxay illinka hore ee hotelka, welina waxaa socda baaritaanno lagu xaqiijinayo sida uu qaraxan ku dhacay iyo cidda ka dambeysa.”
Afhayeenka Booliska Qaasim Axmed Rooble ayaa dhankiisa sheegay in hal qof uu ku dhintay qaraxa, halka labo kalena ku dhaawacmeen, iyadoo gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu damacsanaa inuu gudaha Hotelka uu galo, hase ahaatee albaabka hore isku qarxiyay.
Saraakiisha dowladda ayaa sheegaya in aanay waxba iska bedelin imaanshaha wafdiga Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan, sidii loogu tala galay u imaan doono magaalada Muqdisho.
Al-shabaab ayaa sheegtay Mas’uuliyada qaraxaa ka dhacay Hottelka SYL ee ka soo horjeeda Madaxtooyada Soomaaliya.
War ay soo dhigen Al-shabaab Baraha Bulshada ay ku Xariirto ayey ku sheegeen in Qaraxa uu ahaa Gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa, iyadoona ay Tilmaameen in ay ku dileen dad badan oo ciidamo u badan.
Hotelka SYL ee qaraxu ka dhacay ayaa aad ugu dhow madaxtooyada Soomaaliya, waana hotelkii 10-kii bishaan Janaayo laguy qabtay shirkii wasiirada arrimaha debadda IGAD.
Madaxtooyada Soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday booqashada madaxweynaha Turkiga